Akụkọ - ftgbanwe site na Grid na-ejighị n'aka ya na Panels Solar na Batrị
Gbanwe Ọpụpụ Site na Grid Ike Na-ejighị n'aka na Panels Solar na Batrị
Tinyere mmụba ọkụ eletrik na-arịwanye elu na mmetụta gburugburu ebe obibi na-adịghị mma anyị na-ahụ site na sistemụ okporo igwe anyị, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị na-amalite ịhapụ isi mmalite ọdịnala nke ike ma na-achọ mmepụta ndị a pụrụ ịdabere na ha maka ụlọ ha na azụmaahịa ha.
Gịnị bụ ihe kpatara Belar Power Grid Failure?
Ọ bụ ezie na grid ike dị ike ma dịkwa egwu, nsogbu ya na-arịwanye elu, na-eme ike ọzọ na nkwado ndabere ọbụlagodi maka mkpa obibi na azụmaahịa.
1. Akụrụngwa akụrụngwa
Ka akụrụngwa na-eto, ọ na-aghọwanye nke a na-apụghị ịtụkwasị obi, na-eme ka ọ dị mkpa maka ndozi usoro na mmelite. Ọ bụrụ na mmezigharị ndị a dị mkpa emezughị, nsonaazụ ya bụ ike na-aga n'ihu. Ekwesiri ka emelite grid ndị a dika etinyere ya na isi mmalite ike dị ka ụlọ ndị nwere oghere igwe mana ha ka jikọtara na ntanetị.
2. Ọdachi ndị na-emere mmadụ
Oké ifufe, oké ifufe, ala ọma jijiji, na ajọ ifufe nwere ike ịkpata nnukwu mbibi na ndaghari okporo ụzọ. Ma mgbe ị gbakwunye ụdị nne na akụrụngwa ịka nká, nsonaazụ ya bụ nnukwu oge ezumike maka ụlọ na azụmaahịa.
3.Power Grid Ndị Ohi
Ihe iyi egwu na-arịwanye elu nke ndị na-agba ọsọ na-enwe ike ịnweta usoro anyị na-akpata ma na-akpata ọgba aghara nke ike bụ ihe ọzọ na-emetụta nkwụsi ike nke usoro anyị. Ndị na-eme ihe ike nwetara ikike nke ike nke ụlọ ọrụ ike dị iche iche, nke na-enye ha ikike ịkwụsị ọkụ eletrik na-abanye n'ụlọ anyị na ụlọ ọrụ anyị. Ndị omekome ị nweta ọrụ grid bụ nnukwu iyi egwu nwere ike ibute ọchịchịrị na ala.
Mmehie njehie mmadụ bụ ihe ikpeazụ na-eme ka ọpụpụ ike. Ka oge na oge ihe ndị a na-aga n'ihu, ụgwọ na ọghọm na-eto. Usoro ihe ọmụma na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka ndị uwe ojii, ọrụ mmeghachi omume mberede, ọrụ nkwukọrịta, wdg, na-adabere na ọkụ eletrik iji rụọ ọrụ n'ogo pere mpe.
Goga Mbara Igwe ọ bụ Ngwọta Dị Mma iji lụso alụkwaghịm nke Grid Ike?
Azịza dị mkpirikpi bụ ee, mana nke ahụ bụ naanị ma ọ bụrụ na itinye nrụnye gị n'ụzọ ziri ezi. Ntinye nke batrị nkwado maka nchekwa nchekwa ike na ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi dịka ogwe ọkụ nwere ike ichebe anyị pụọ na ike ọkụ na-aga n'ihu ma chekwaa azụmaahịa ọtụtụ ego.
Grid-ekekọta vs. Off-Grid Solar
Isi ihe dị iche n ’etiti okporo igwe jikọrọ ọnụ na igwe na - apụ na - echekwa ike nke sistemu gị na - arụpụta. Off-grid usoro enweghị ohere ike grid na-achọ nkwado ndabere batrị maka ịchekwa gị ngafe ike.
Gbanyụọ grid sistemụ na - adịkarị ọnụ karịa sistemu jikọtara ọnụ n'ihi na batrị ha chọrọ dị ọnụ. A na-atụ aro ka itinye ego na igwe na-enye ọkụ maka sistemụ grid gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ike mgbe abalị ma ọ bụ ihu igwe adịghị mma.
N'agbanyeghị ihe ị kpebiri, ịgbanye na ntanetị ike na-enweghị ntụkwasị obi na ịchịkwa ebe ike gị si abịa bụ nhọrọ amamihe. Dịka onye na-azụ ahịa, ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ego dị ukwuu, kama ị ga-enwetakwa nchekwa na nkwekọ dị oke mkpa nke ga-eme ka ike gị rụọ ọrụ mgbe ịchọrọ ya.
Solar Iju Mmiri Light, Ọkụ Anyanwụ n'èzí, Ogige Uhie Mbara Igwe, Anyanwụ Inverters, Gbanyụọ Grid Inverter, Solar Street Light,